Madaxwayne ku-xigeenka DDSI ahna wasiirka waxbarashada oo socdaal shaqo ugu maqnaa wadanka dibadiisa ayaa maanta dib uga soo dagay garoonka diyaaradaha ee garaad wii waal international Airport. - Cakaara News
Madaxwayne ku-xigeenka DDSI ahna wasiirka waxbarashada oo socdaal shaqo ugu maqnaa wadanka dibadiisa ayaa maanta dib uga soo dagay garoonka diyaaradaha ee garaad wii waal international Airport.
Jigjiga(CN) khamiis July-31-2015.Madaxwayne ku xigeenka DDSI ahna wasiirka waxbarashada mudane Mawliid Haayir hasan oo socdaal shaqo ugu maqnaa wadanka dibadiisa gaar ahaan wadanka Barasil ayaa maanta dib ugu soo laabtay xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga.
Madaxwayne ku-xigeenka ayaa warbaahinta deegaanka kula hadlay qolka nashadada ee garoonka diyaaraha ee Garaad Wiilwaal International Airport, wuxuuna ka warbixiyay ahmiyada ujeedada socdaalka uu u tagay wadanka dibadiisa.
Mudane Mawliid HaayirTaasi ayaa sheegay in ay socdaalkaasi ku wehelinayeen masuuliyiin ka socdotay wasaaradaha heer faderaal iyo masuuliyiin ka kala socotay xafiisyada deegaanada dalka.ay taasoo wafti ahaan ay u tageen wadanka Brazil ka qaybgalka shirk u saabsanaa aqoon iswaydaaris iyo khibrad korodhsi ku qotomay habraacyada fulinta, sii xoojinta hirgalinta qorshyaasha horumarineed gaar ahaan dhinaca damaanad qaadka cuntada(Food Security) iyo waliba baraamijka nafaqada(Nutritions) oo ah barnaamij horumarineed.
maadaamo oo ay xukuumada JDFI iyo kuwa deegaanaduba dadaal xoogan ugu jiraan sidii uu dalku hore ugu biiri lahaa wadama ugu horeeya kuwa uu dhaqaalahoodu dhex dhexaadka yahay.Madaxwayne ku xigeenka oo si wada hadalkiisa ayaa sheegay in ay socdaakaasi shaqo ku soo gabababoobay guulo wax ku ool ah oo gashi horumar u noqonaya dalka iyo deegaankaba wuxuuna sheegay in ay